I-Qatar Airways ibuyisa ii-A380 zayo ngexesha lasebusika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Qatar Airways ibuyisa ii-A380 zayo ngexesha lasebusika
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Novemba 5, 2021
I-Qatar Airways ibuyisa i-A380 yayo ngexesha lasebusika.
Ukumiselwa kwamva nje kwe-19 yeenqwelo ze-Airbus A350 ngumlawuli ngenxa yomba oqhubekayo onxulumene nokuthotywa okukhawulezileyo komphezulu ongaphantsi kwepeyinti kukhokelele kwisigqibo esimadolw' anzima sokubuyisela i-A380 enkonzweni.
Ukunyuka okuqhubelekayo kwemfuno yabakhweli kunye nomthamo wokubhabha kuthungelwano lwehlabathi lonke olulindelweyo ngexesha lasebusika lika-2021.
I-Qatar Airways ngokuthandabuza yenza isigqibo sokwamkela iinqwelo ze-A380 zibuyele ekusebenzeni ngenxa yokunqongophala komthamo okuqhubekayo.
Umbhexeshi welizwe lase Qatar uyaqhubeka nokwakha uthungelwano, olumi kwiindawo ezingaphezu kwe-140 ngoku.
A Indlela yomoya yaseQatarI-Airbus A380 yaya esibhakabhakeni okokuqala kwiinyanga ezingaphezu kwe-18 ekuqaleni kwale veki, ibeka inqwelomoya ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseDoha (DIA) ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseHamad (HIA) emva kokuba inqwelomoya ithathe isigqibo sokwamkela inqwelomoya kwakhona. ukusebenza ngenxa yokunqongophala kwamandla okuqhubekayo.
Kucingelwa ukuba ubuncinci abahlanu kwinqwelomoya ye-10 Airbus Iinqwelomoya ze-A380 ziza kubuyiselwa emsebenzini okwethutyana kwezi veki zizayo ukuze zixhase umthamo wezithuthi kwiindlela eziphambili zasebusika, kuquka iLondon Heathrow (LHR) neParis (CDG), ukusuka nge-15 kaDisemba 2021.
Umthwali welizwe welizwe laseQatar okwangoku ujongene nemida ebalulekileyo kumthamo wakhe wezithuthi ngenxa yokumiselwa kwamva nje kwe-19 yayo. Airbus Izithuthi ze-A350 ngenxa yemeko ekhawulezileyo yokuthotywa komphezulu echaphazela umphezulu wenqwelo-moya engaphantsi kwepeyinti, njengoko kugunyaziswe nguGunyaziwe we-Qatar Civil Aviation Authority (QCAA).
Inkampani yeenqwelomoya iphinde yazisa kwakhona inani layo Airbus Izithuthi ze-A330 kulandela ukonyuka okuqhubekayo kweemfuno zomthamo ngenxa yokucuthwa kwezithintelo zokuhamba kunye nencopho ezayo yexesha leholide yasebusika, ekulindeleke ukuba ibone ukubuyela kumanqanaba angaphambi kwe-COVID.
Qatar Airways UMlawuli oyiNtloko weQela, obekekileyo uMnu. Akbar Al Baker, uthe: “Ukumiswa kwamva nje kwe-19 yeenqwelomoya ze-A350 zeQatar kusishiye singenayo enye indlela ngaphandle kokubuyisela okwethutyana ezinye zeenqanawa zethu ze-A380 kwiindlela eziphambili zasebusika.
"Ezi ziseko zibangelwa ngumba oqhubekayo onxulumene nokuthotywa okukhawulezileyo komphezulu wefuselage ngaphantsi kwepeyinti, ehleli ingumcimbi ongasonjululwanga phakathi. Qatar Airways kunye nomvelisi engekaqondwa unobangela osisiseko.